‘Hausvike Kirisimasi uri mupenyu’ | Kwayedza
‘Hausvike Kirisimasi uri mupenyu’
01 Mar, 2019 - 00:03	 2019-02-28T21:22:39+00:00 2019-03-01T00:01:31+00:00 0 Views
MUKADZI wekushaiswa rugare nemurume nemudzimai wake – avo vakamutengesera sitendi yemba asi vaanoti vari kurima pachivanze chake vachiudza vana vake kuti iye haasvike Kirisimasi ari mupenyu – akazopotera kudare redzimhosva.
Memory Magunya akamhan’arira Francis Chimbamwe nemudzimai wake Chipo Matamaire kudare reHarare Civil Court achiti vari kurima pachivanze chake.
Magunya anoudza mutongi Tafadzwa Miti kuti pose Matamaire paanosanga nevana vake pachiteshi, anovatyisidzira kuti achauya kumba kwavo achivapedza vose uyezve Chimbamwe akaudza vana vake kuti Kirisimasi haisvike asati afa.
“Vakanditengesera sitendi asi pandakaenda kumahofisi ekanzuru, vakati sitendi haisi muzita ravo vaviri ava, itoriwo nemuridzi wayo. Chimbamwe akasangana nevana vangu pachiteshi akavaudza kuti Kirisimasi haisvike ini ndiri mupenyu,” anodaro.
Chimbamwe naMatemairi vanoti Magunya haana kuvapa mari yavo yakasara pavakamutengesera sitendi saka vave kutora sitendi yavo.
“Amai ava takavatengesera sitendi nemari inoita $8 500 asi havana kupedza chikwereti, apa vave kutotengesera mumwe munhu futi. Saka takadzoka kuzotora sitendi yedu,” anodaro Chimbamwe.
Mutongi Miti akapa Magunya gwaro redziviriro nererunyararo.